Cate Blanchett – Cast – Burmese Subtitle
Hanna ၂၀၁၁ က ထှကျရှိခဲ့တဲ့ အကျရှငျ ဒရာမာ ကားလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားကို ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာပဲ Hanna ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ပဲ အပိုငျးရှဈပိုငျးပါတဲ့ စီးရီးတဈခုအဖွဈ Amazon က ရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ(Site မှာ ရှာ Down လို့ရပါတယျ)။ ဒီဇာတျကားရဲ့ ကြောရိုးကိုပဲ မှီငွမျးထားတာမို့ ဇာတျလမျးခငျြးဆငျတူတဲ့အတှကျ Series ကွညျ့ပွီးတဲ့သူရော၊ မကွညျ့ရသေးသူပါ အဆငျပွစေမှောပါ။ ဒီဇာတျကားမှာတော့ ဟနျနာအဖွဈ Saoirse Ronan အပွငျ နာမညျကွီးသရုပျဆောငျတှဖွေဈကွတဲ့ Troy နဲ့ Hulk(2013) မငျးသားကွီး Eric Bana ၊ Cinderella နဲ့ Thor: Ragnarok မှာ Hela အဖွဈပါဝငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးကွီး Cate Blanchett တို့က ပါဝငျအားဖွညျ့ထားတာပါ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဟနျနာဆိုတဲ့ DNA တိုးမွှငျ့ပွောငျးလဲခံထားရတဲ့ ကောငျမလေးနဲ့ သူ့ကိုအမိဖမျးခငျြသူတှအေကွောငျး ဇာတျအိမျတညျထားတာပါ။ မိမိဘဝအမှနျကို သိခငျြတဲ့ဟနျနာ၊ ဟနျနာ့ကို ဘဝနဲ့ရငျးပွီး စောငျ့ရှောကျလာခဲ့တဲ့ အဲရဈနဲ့ အတိတျကအလုပျကွှေးကို အပွီးဆပျဖို့ဆုံးဖွတျခကျြခထြားတဲ့ ...
IMDB: 6.8/10 186,361 votes
The House withaClock in Its Walls (2018) ဒီကနေ့ ရုပ်ရှင်အကြိုကဏ္ဍမှာ တော့ အမေရိကန်လျှို့ဝှက်ဆန်း ကြယ် စိတ်ကူးယဉ် ဟာသဇာတ် ကားလေး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁၉၅၅ ကာလမြင်ကွင်းနဲ့ အတူ (၁၀)နှစ်အရွယ် လူငယ် လေး လူးဝစ္စဘာနာဗဲ့တ်ဟာ မိဘ တွေဆုံးပါးကုန်တဲ့နောက် မီချီဂန် မှာရှိတဲ့ သူ့ဦးလေးဂျိုနသန်နဲ့အတူ နေထိုင်ဖို့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဦးလေး ဂျိုနသန်ဟာ နှစ်ပေါင်း များစွာ သက်တမ်းရှိတဲ့ အိမ်အို ကြီးမှာ နေထိုင်တာဖြစ်ပြီး နာရီ စက် တချက်ချက်မြည်သံတွေ ထူးဆန်းစွာ ကြားရတဲ့ အိမ်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုနသန်ဟာ မှော်အတက် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အိမ်နီးနားချင်းလည်းဖြစ်၊ အခင် ဆုံးမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တဲ့ ဖလော် ရင့်ဆိုတဲ့ အစွမ်းထက်စုန်းမနဲ့ အတူ အိမ်ကြီးထဲက ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်တွေကို အတူဖော် ထုတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာရီသံ တချက်ချက်ကြား နေရတဲ့ အိမ်ကြီးကို ဟိုးအရင် တုန်းက အိုက်ဇက်ဆိုတဲ့ မှော် ဆရာနဲ့ ...
IMDB: 6.1/10 29,390 votes
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒုတိယ Hobbit ကား အပြီးကနေ ဆက်ထားပြီး၊ Smaug က Laketown ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီး၊ Smaug ကိုလည်း Brad က Black Arrow သုံးပြီး ပစ်သတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ Brad က Laketown လူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ လူတွေကို Brad က ဦးဆောင်ပြီး တောင်ကြားထဲက ရွှေတွေကို သွားယူပြီး ဘ၀အသစ်စဖို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ကားမှာတုန်းက Thorin က တောင်ထဲက သူ့မြို့ ကိုပြန်သိမ်းဖို့အတွက် လက်နှက်နဲ့ လှေအကူအညီ ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီး၊ အောင်မြင်သွားရင် ရွှေတစ်ချို့ကို လူတွေကို ခွဲပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ Thorin က သူ့ အဖိုးလို ပဲ လောဘတက်ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ လည်း ပေးမ၀င်တော့သလို ...
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) The Hobbit ပထမဇာတ်ကားအဆက် ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီကားက Lord of the Rings Trilogy ရဲ့ Prequel ဖြစ်ပြီး The Hobbit Trilogy ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားမှာ Lord of the Rings ထဲက မင်းသားချော Orlando Bloom က Legolas အဖြစ်ပြန်လည်ပါဝင်လာပြီး၊ အခြား ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေလည်း အများအပြားပါဝင်လာပါတယ်။ ပထမဇာတ်ကား အစပိုင်းမှာ Dwarf တွေရဲ့ ရတနာတွေ ကြောင့် နဂါးကြီးတစ်ကောင်က Dwarf တွေ မြို့ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက် ခဲ့သလို Dwarf တွေလည်း သူတို့ရဲ့ မြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ ဒီကားမှာ Dwarf တွေက Gandalf နဲ့ Bilbo (Frodo ရဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ) ရဲ့အကူအညီနဲ့ သူတို့ မြို့ထဲကို ခိုးဝင်ပြီး နဂါးကြီးစောင့်ကြပ်နေတဲ့ ...
The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) ရှေးရှေးတုန်းက လူပု ထရော် ဟာ အဲရီဘော်(ရ်)ပြည်ရဲ့ ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူ့မိသားစုဆွေမျိုးများ ချမ်းသာလာကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမော့(ဂ်)(Smaug) ဆိုတဲ့ နဂါးကြီးက သူတို့ရဲ့ရွှေတွေကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ဒေး(ပ်)မြို့ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ရုံမက အဲရီဘော်(ရ်)ပြည်သားတွေကို နှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ထရော်ဧ။်မြေးဖြစ်သူ သိုရင် ကနတ်သူငယ်တို့ရဲ့ဘုရင် ထရန်ဒိုး(လ်)ဆီက အကူအညီသွားတောင်းပေမယ့် ၄င်းတို့က မကူညီတဲ့အပြင် လူပုတွေကို ကျောခိုင်းစွန့်ခွာသွားကြပါတယ်။ဟော့ဘစ် ဆိုတဲ့ မျိုးနွယ်စုဝင် လူငယ် ဘီ(လ်)ဘိုကို မှော်ဆရာကြီး ဂန်ဒေါ့(ဖ်)က လာတွေ့ပြီး စမော့(ဂ်) လက်ထဲက ရတနာတွေကို သွားခိုးယူမယ့်သိုရင်နဲ့ သူ့တပည့်လူပုစစ်သည် တစ်စုနဲ့အတူ လိုက်ပါဖို့စည်းရုံးပါတယ်။ဘီ(လ်)ဘိုနဲ့လူပုတွေဟာ အထီးကျန်တောင် ပေါ်တက်ကြတုန်း ထရိုး(လ်)ဆိုတဲ့ ဘီလူးကြီးတွေက ဘီ(လ်)ဘိုတို့အားလုံးကို သတ်စားခါနီးမှာ ဂန်ဒေ့ါ(ဖ်)ရောက်လာပြီး ဘီလူးတွေကို ကျောက်ရုပ်ဖြစ်အောင် ဖန်ဆင်းကာ သူ့လူတွေကို ကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ဘီလူးကြီးတွေရဲ့လိုဏ်ဂူထဲ ၀င်ရှာဖွေတဲ့အခါ တန်ခိုးရှိတဲ့ အယ်(လ်)ဗင်ဓားမြှောင်တွေကို ဘီ(လ်)ဘိုတို့ ကောက်ရကြပါတယ်။ ဘီ(လ်)ဘိုတို့အုပ်စုဟာ ဂရင်းဝု(ဒ်)ဆိုတဲ့ ...
The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) ဒီကားကတော့ လူကြိုက်များ နာမည်ကြီးတဲ့ The Lord of the Ring Trilogy ရဲ့ နောက်ဆုံး ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုထဲက ကောင်းပြီးသား ၀တ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ကြတဲ့အခါ ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ကြိုက်မတွေ့ကြပါဘူး။ Harry Potter လိုကားတောင်မှ တကယ့် စာအုပ်ကို အားပေးတဲ့ပရ်ိတ်သတ်တွေ သိပ်မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် The Lord of the Rings ဇာတ်ကားတွေကတော့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေသာမက ရုပ်ရှင် ဝေဖန်ရေးသမား တွေ ပါ ချီးကြူးခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းအကြောင်း ပြောပြရာမှာ အသေးစိတ်ပြောဖို့ မလွယ်သလို၊ အသေးစိတ်ပြောရင် ဇာတ်လမ်း ရဲ့အဓိကအချက်တွေ ပါကုန်မှာဖြစ်လို့၊ အနည်းငယ်ပဲ တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ကအကြောင်းအရာက ဇာတ်လမ်းမှာ သိကိုသိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး Spoiler ...
The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) ဒီကားကတော့ လူကြိုက်များ နာမည်ကြီးတဲ့ The Lord of the Ring Trilogy ရဲ့ ဒုတိယမြောက် ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုထဲက ကောင်းပြီးသား ၀တ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ကြတဲ့အခါ ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ကြိုက်မတွေ့ကြပါဘူး။ Harry Potter လိုကားတောင်မှ တကယ့် စာအုပ်ကို အားပေးတဲ့ပရ်ိတ်သတ်တွေ သိပ်မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် The Lord of the Rings ဇာတ်ကားတွေကတော့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေသာမက ရုပ်ရှင် ဝေဖန်ရေးသမား တွေ ပါ ချီးကြူးခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းအကြောင်း ပြောပြရာမှာ အသေးစိတ်ပြောဖို့ မလွယ်သလို၊ အသေးစိတ်ပြောရင် ဇာတ်လမ်း ရဲ့အဓိကအချက်တွေ ပါကုန်မှာဖြစ်လို့၊ အနည်းငယ်ပဲ တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ကအကြောင်းအရာက ဇာတ်လမ်းမှာ သိကိုသိသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး Spoiler ...
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) ဒီကားကတော့ လူကြိုက်များ The Lord of the Ring Trilogy ရဲ့ အစ၊ Middle Earth ကို ရုပ်ရှင် ကြည့်ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုထဲက ကောင်းပြီးသား ၀တ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ကြတဲ့အခါ ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ကြိုက်မတွေ့ကြပါဘူး။ Harry Potter လိုကားတောင်မှ တကယ့် စာအုပ်ကို အားပေးတဲ့ပရ်ိတ်သတ်တွေ သိပ်မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် The Lord of the Rings ဇာတ်ကားတွေကတော့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေသာမက ရုပ်ရှင် ဝေဖန်ရေးသမား တွေ ပါ ချီးကြူးခဲ့ရတဲ့ဇာတ်ကားကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းအကြောင်း ပြောပြရာမှာ အသေးစိတ်ပြောဖို့ မလွယ်သလို၊ အသေးစိတ်ပြောရင် ဇာတ်လမ်း ရဲ့အဓိကအချက်တွေ ပါကုန်မှာဖြစ်လို့၊ အနည်းငယ်ပဲ တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်ကအကြောင်းအရာက ဇာတ်လမ်းမှာ ...
Mowgli: Legend of the Jungle (2018) 1967 ခုနှစ်က The Jungle Book ကို အသက်ပြန်သွင်းထားတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ် ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ 2016 က ရုံတင်ခဲ့တဲ့ The Jungle Book ထက် Netflix က ရိုက်တဲ့ ဒီ Mowgli ကို ပိုပြီး သဘောကျမိတယ် Effects တွေကလဲ အတော်လေးကို အသက်ဝင်တယ် ဇတ်လမ်းကျောရိုးက တူပေမဲ့ ဇတ်လမ်းဇတ်ကွက်လေးတွေတော့ နည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ် အရင်ကလို ကလေးကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်သက်သက် မဟုတ်တော့ပဲ သွေးထွက်သံယို အခန်းလေးတွေ အနည်းငယ်ပါတယ် ဇတ်လမ်း ပုံစံကတော့ Mowgli ရဲ့ မိဘတွေဟာ ခြေတဖက်ကျိုး နေတဲ့ ရှီရာခန်း ဆိုတဲ့ ကျားဆိုးကြီးရဲ့ သတ်ဖြတ်ချင်းကို ခံရပြီး Mowgli လေးကတော့ ကံကောင်းပြီး လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ် ကျားသစ်နက်ကြီး ဘာဂီရာ က ကလေးငယ်ကို ကယ်ဆယ်ပြီး ၀ံပုလွေမိသားစုဆီ ပေးခဲ့တယ်…. ၀ံပုလွေတွေဟာလဲ Mowgli လေးကို မိသားစုဝင်အဖြစ်လက်ခံခဲ့ပြီး သူတို့ အသက်ရှိနေသ၍ ကျားဆိုးကြီး ရှီရာခန်း ဆီကနေ Mowgli ကို ကာကွယ်ပေးမယ်လို့ သစ္စာဆိုခဲ့ကြတယ်… ဒီလိုနဲ့ Mowgli အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ သူဟာ ၀ံပုလွေ တွေနဲ့ မတူတာကို သတိထားမိပြီး မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ရှိလာခဲ့တယ်… သူ့မေးခွန်းတွေကို ...
IMDB: 6.6/10 34,852 votes
The Curious Case of Benjamin Button (2008) ဒီဇာတ်ကားဟာ အနုပညာ ဒါရိုက်တာ၊ အကောင်းဆုံး မိတ်ကတ်ပညာ၊ ရုပ်ရှင် အထူးပြုလုပ်ချက် စတဲ့ အော်စကာဆု ၃ဆုကို 2008 ခုနှစ်မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး တခြားနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ဆုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီဆုတွေရတာလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားကိုကြည့်ရင်းနဲ့ သိလာမှာပါ။ အဓိကဇာတ်ဆောင် ဘင်ဂျမင်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့မင်းသားကတော့ မြန်မာပရိတ်သတ်တွေနဲ့မစိမ်းတဲ့ Brad Pitt ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းနေနဲ့ကတော့ လူဂုဏ်ထံမိသားစုကပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကလေးတဦးဟာ မွေးမွေးချင်းပဲ မိခင်ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဖိုးအိုရုပ်ပေါက်နေတဲ့ခလေးကို ဖခင်ဖြစ်သူက ဘယ်လိုမှ ဂရုဏာမသက်နိုင်ပဲ လူအိုရုံတခုရှေ့မှာ စွန့်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ လူအိုတွေကို စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ လူမည်းမက သူ့ကိုမငြိုငြင်ပဲ သားအရင်းလို မွေးစားစောင့်ရှောက်ပြီး ဘင်ဂျမင်လို့ နာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘဝအစကတည်းက ထူးခြားနေတဲ့ ဘင်ဂျမင်ဆိုတဲ့ကလေးဟာ အစကတည်းကပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ရုပ်ရော စိတ်ဓါတ်ရော အသက်ကြီးနေတဲ့ အဖိုးအိုတယောက်လိုပဲ နေထိုင်အသက်ရှင်ရင်းကနေ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာပါတယ်။ ဘင်ဂျမင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ အသက်ကြီးလာလေ နုပျိုလာလေလေပါပဲ။လူအိုရုံမှာသူနေတုန်းက ဒေစီဆိုတဲ့ကလေးမလေးနဲ့ဆုံတွေ့ဖူးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက သံယောဇဉ်ရှိခဲ့ကြပြီး ဘင်ဂျမင် ပင်လယ်ထဲရွက်လွှင့်ဖို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကစလို့ မတွေ့ဖြစ်တော့ပဲ ...
Cinderella (2015) ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Disney ရဲ့ နာမည်ကျော် Animation ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်တဲ့ Cinderella ဇာတ်ကားလေးကို ရုပ်ရှင်ကားအဖြစ် Kenneth Branagh, Anna Worley, Nicoletta Mani တို့မှပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ IMDB Rating 6.9 ရရှိထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Cinderella Animation ဇာတ်ကားကိုကြည့်ဖူးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကသိပ်ပြီးတော့မစိမ်းဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အညွှန်း အယ်လာ တို့မိသားစုလေးဟာအလွန်တရာမှ သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းတဲ့မိသားစုလေးတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ မမျှော်လင့်တဲ့ ကံကြမ္မာ မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုဟာ အယ်လာရဲ့အမေကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အယ်လာတို့ သားအဖနှစ်ယောက်တည်း နှစ်ရက်ရှည်များစွာဖြတ်သန်းလာပြီးနောက်မှာတော့ အယ်လာရဲ့ အဖေက နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အယ်လာကိုတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတော့တယ်။ မြင့်မြတ်လှတဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်လေး အယ်လာကတော့ သူ့အဖေရဲ့ ဆန္ဒတွေကိုလိုက်လျောပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အယ်လာ့ရဲ့ မိထွေးဖြစ်လာမယ့်သူက အကင်းပါးပြီး သူ့ရဲ့ သမီး၂ယောက်ကလွဲလို့ အယ်လာ့အပေါ်မှာ ဘာချစ်ခြင်းမေတ္တာမှမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး ၊ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းတဲ့သူပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ အယ်လာ့အဖေက ခရီးတစ်ခုသွားပြီး အပြန်လမ်းမှာ နာမကျန်းဖြစ်ပြီးဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ မိထွေးလုပ်သူရဲ့ ချယ်လှယ်မှုကြောင့် အယ်လာတစ်ယောက် အိမ်ကြီးရဲ့ ထပ်ခိုးလေးမှာဘဲသွားနေရရှာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မင်းသားလေးက ကြင်ရာရွေးချယ်တဲ့အခါမှာတော့.....ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆက်လက်အားပေးကြပါခင်ဗျာ။ File Size – 2.64GB , 0.96GB Quality – Blu-Ray 1080P ...
IMDB: 6.9/10 133,234 votes